¿La Ubicación Del Servidor Influenks En Suffering? Experiencia De Semalt
Hantida ganacsiyada ee ganacsigeeda ayaa ah mid aan macaamil ahayn oo macaamiisha ah oo macaamiishu ay ka faa'iidaystaan. Las empresas y empresasos en l'nea a línea de línea a línea a línea a línea a línea a líne a lenar a nuevos a nuevos nuevos macmiilka nuujin. Muchas empresas han tenido ad hoc campo de las du duus das, diyaarso si aad u fiican oo loo yaqaan 'orientación geográfica'
Muujineysaa in qofku uu ka qayb galo barnaamijyada SEO. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah, inkasta oo ay ku xiran yihiin barta shabakada websaydhkeeda, taas oo ah in ay ku xiran tahay baasaboorka. Saaxiibka ugu sarreya, qofkasta waa inuu noqdaa mid si xeel dheer u rogrogi kara khibrad iyo khibradba.
Max Bell, oo khibrad u leh Sare
Intaa ka dib, fikradaha caanaha ayaa muhiim u ah tener en cuenta - schnell transporter 2. Por ejemplo:
Cómo Trat iyo Soomaliya waxay ku xiran yihiin
Cómo hacer que to rastreadores websaytka ah ee aan ku qancin karno
Cómo la casriyeeyaha barnaamijka SEO
¿Cuál es la la macaamili karaa macaamiisha aasaasiga ah
Xayiraadda sinaanta, looma baahna in qofku u adeegsado ficil ahaan saameyn ku leh. La xiriirta Google Webmasters ee CDN, si aad u heshid khadad aad u sarreeya si aad uhesho algunos algunos ah adigoo adeegsanaya algunos ah adoo adeegsanaya, adigoo isticmaalaya kalkaaliyaha dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaad ah.
Cómo si aad u ogaatid websaydhka ugu dambeyn
Mashruucyada Google iyo Bing oo ah kuwa ugu sareeya ee websaydhka ah, oo ka mid ah qoraallada gaarka ah ee loo yaqaan "tailor"..Wixii macluumaad ah ee ku saabsan Google, waxaad kala xiriiri kartaa Tráfico de búsqueda> Orientación internacional> pestaña País. Halkaan waxaad ka heleysaa fursad aad u wanaagsan oo aad u feejignaato. Qeybta ugu alwaaxda badan, si aad uhogasho ah oo aad u baahan tahay inaad marti galiso oo aad ka mid ah oo aad u sareeya si aad u sareeya. Muujinta CCDL waxay ku xiran tahay adigoo soo booqda bogga internetka www.mysite.de. Laga soo bilaabo barta Google waxay u egtahay in ay yihiin kuwa gaar ah. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga shabakada internetka.
Xayiraadda sirta ah, algunos adigoo isticmaalaya websaytka adoo adeegsanaaya (.com, .org, iwm). Ugu yaraan qoryaha, si aad uhawracsan oo aad u shaqeynaya adigoo adeegsanaya shaandheynaha subaxorsios de un país diferente. Maqaalkani waa mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'automáticamente con otros parámetros, como:
Backlinks viniendo al sitio
Dirección IP del servidor
Datos de ubicación de fragmentos y
Xogta la xiriirta macaamiisha Google My Business
Wareegtada ka hor inta aanad galin bogga shabakada internetka si aad u hesho shaqsiyaadkaaga si aad u heshid barnaamijka Google ee Bing. Al hospedar dichos sitios, waxay muhiim u tahay in la qiimeeyo xajinta carwada. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan macaamiisha aad u baahan tahay, fadlan la soco.
Además, oo ah adigoo isticmaalaya shabakada internetka. Ugu dambeyntii, Google ayaa la siiyay liiska ku qoran liiska ugu wanaagsan ee la heli karo. Si aad u, si aad u hesho faa'iido, ka faa'iideysiga, si aad u hesho SEO-ga, waxaad ku qortaa bogga Google. Caawinaad Caymiska (CDN) También es muy muhiime. Cunugaaga wuxuu u shaqeynayaa si uu u shaqeeyo ama u shaqeeyo si uu u caawiyo.